HDI PCB mpanamboatra | China HDI PCB Factory & mpamatsy
8 layer HDI PCB ho an'ny indostrian'ny fiarovana
Ity dia 8 board circuit board ho an'ny indostrian'ny fiarovana. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.
10 sosona HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB
Ity dia takelaka boribory 10 sosona ho an'ny indostria Telecom. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.
22 layer HDI PCB ho an'ny tafika sy fiarovana
Ity dia birao boribory 22 layer ho an'ny indostrian'ny fiarovana. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.
HDI Circuit board ho an'ny rafitra tafiditra
Ity dia takelaka boribory 10 layer ho an'ny rafitra tafiditra. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.
HDI PCB misy sisiny nopetahany Semiconductor
Ity dia solaitrabe boribory 4 ho an'ny fitsapana IC. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.